Mari-nehupfumi, 22 Kukadzi 2019
Chishanu 22 Kukadzi 2019
Mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, Va Rejoice Ngwenya, vanoti veruzhinji munyika vakamirira mutemo uchadzikwa nebhanga guru renyika kuitira kuti vanyatsoziva kuti mari itsva yakaturwa na Doctor John Mangudya, imari yakaita seyi chaizvo.
Vaimbove Vashandi veKanzuru yeHarare Vanoratidzira Vachida Mari Dzavo dzeMudyandigere
Vaimbove vashandi vekanzuru yeHarare vave pamudyandigere, varatidzira nhasi pamuzinda wekanzuru weTown House, vachinyunyuta nemari dzavo dzemudyandigere dzavanonzi vari kuti havasi kupiwa.
Paramende Yozeya Bhiri reNhaurirano Pakati peVashandi neVashandirwi
Dare reparamende richiri kuzeya bhiri rekuyedza kudzika mutemo wenhaurirano pakati pevashandi, vashandirwi ne hurumende kana kuti Tripartite Negotiating Forum Bill.
South Africa Yoshorwa Nekuda Kupa Zimbabwe Zvombo Zvekurwisa Vanoratidzira
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa, Amai Lindiwe Sisulu, vakazivisa nemusi weChipiri kuti hurumende yavo iri kuronga kubatsira mapurisa ezimbabwe kuburikidza nekuapa zvombo zvisingauraye zvekushandisa mukuparadza vanhu vanenge vachiratidzira.
VaMugabe Vasvitsa Makore Makumi Mapfumbamwe neMashanu
Vaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nemashanu.
Bato raMDC rinoti riri kushushikana zvikuru nekusavimbika kwemutungamiri wenyika, uye vari mutungamiri weZanu PF, VaEmmerson Mnangagwa panyaya yenhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nevana veZimbabwe, uye kuti munyika muve nekugadzikana.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti hurumende inofanira kusunga dzisimbe muhurongwa hwayo hwekugadzirisa nyaya dzezvehupfumi kunyanyawo dambudziko rekuti nyika yoshandisa mari ipi sezvo ikozvino iri sarura ude.
Kukadzi 20, 2019
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatambira nenzira dzakasiyanasiyana hurongwa hwemashandisirwo emari hwaparurwa nagavhuna vebhanga guru renyika, reRserve Bank of Zimbabwe, Doctor John Mangudya.
Bank guru renyika, reReserve Bank of Zimbabwe (RBZ), raparura hurongwa kwekuti mabhanga munyika atange kutenga mari yekunze pachena uye rati izvi zvichauraya musika mutema.
Muimbi wechidiki, Mbeu, uyo akabatsirwa zvakanyanya munyaya dzemumhanzi namushakabvu Oliver Tuku Mtukudzi anoti chido chake kuti azadzikise chishuwo chaTuku chekuendesa mberi nhaka yekuimba.
Mutungammiri wenyika yeSouth Africa VaCyril Ramaphosa vari kutarisirwa kutungamira makurukota avo kuZimbabwe kunoita hurukuro dzekudyidzana nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa.
Kambani inotengesera gorosi vanobika chingwa yeGrain Millers Association of Zimbabwe kana kuti GMAZ inoti nyika yasarirwa negorosi rinokwana vhiki imwe chete chete. Izvi zviri kukonzerwa nekukindikana kweReserve Bank of Zimbabwe kuipa mari yekunze.